Waa maxay sababta darajooyinka caruurtu aanay ahayn waxa ugu muhiimsan | Bezzia
Waa maxay sababta darajooyinka carruurtu aanay ahayn waxa ugu muhiimsan
Tony Torres | 25/05/2022 20:00 | Talada hooyooyinka
Marka sannad dugsiyeedka cusub uu dhammaanayo, waa waqtigii la heli lahaa oo la qiimeyn lahaa darajooyinka laga baqo, darajooyinkaas Waxay wax badan u dhimi karaan isku-kalsoonaanta kuwa yaryar haddaan si sax ah loo qaabilin. Sababtoo ah hal shax, tiro fudud oo la xidhiidha mawduuca, kuma filna in la go'aamiyo waxa dadaalku ahaa muddada koorsada.
Yaa kale iyo yaa ka yar ayaa soo maray dhibaatada ah in wax kasta la geliyo hal qoraal, wax run ahaantii caddaalad darro ah, gaar ahaan marka ay timaado carruurta. Sababtoo ah natiijooyinka imtixaannada waa inaan ku darnaa dadaalka la sameeyay, saacadaha shaqada ee guriga, naf-hurnimada ka tagista waxyaabo kale oo xiiso leh si ay u qabtaan shaqooyinka iyo shaqada guriga. Dadaal bilo badan taas oo la dhayalsan karo haddii kaliya la tixgeliyo buundooyinka u dambeeya.
1 Qoraallada maaha kuwa ugu muhiimsan
1.1 Maxay qoraaladu ka sheegaan shakhsiyadda ardayda
1.2 Waddada ayaa ka muhiimsan yoolka
Qoraallada maaha kuwa ugu muhiimsan
Inkasta oo ay lagama maarmaan tahay in la qiimeeyo carruurta, darajooyinku maaha kuwa ugu muhiimsan sababtoo ah xaalado aad u yar ayaa ka tarjumaya dadaalka dhabta ah ee ardayga. Si aad u gaarto darajooyinka ugu dambeeya waa inaad soo martaa maalmo badan oo waxbarasho ah, casharo badan oo mararka qaarkood aan si fiican loo fahmin. Maalmo ay ardaydu aad uga maqan yihiin maskaxdooda, madaxdoodu waxyaabo kale ku jiraan, korayaan, horumarinayaan shakhsiyadooda, iyaga oo aan awoodin inay dayacaan waxbarashadooda.
Inta lagu jiro bilahaas wiilasha iyo gabdhaha ayaa waqti badan ku bixiya diyaarinta iyo waxbarashada oo marka maalinta imtixaanku soo gaaro waxay wax walba ku ciyaaraan hal kaar. Wax qayb ahaan cadaalad darro ah, sababtoo ah maalintaas waxaa laga yaabaa inay ka sii dareemeyso, oo ay la socdaan dhibaatooyinka fiirsashada, waxaa laga yaabaa inay si xun u seexdeen ama si fudud u garan waayeen sida loo sameeyo imtixaanka. Y darajadaas ay helaan, kama tarjumayso dadaalkaas oo dhan taasoo haddii ay taasi dhacdo aan lahayn abaalkii ay xaqa u lahayd.
Sababahaas oo dhan dartood, darajooyinka carruurtu maaha waxa ugu muhiimsan. Kaliya waa dariiqo lagu xakameynayo waxbarashada iyada oo loo marayo nidaam si fudud loo fahmi karo oo u dhexeeya waalidiinta iyo macallimiinta. Sidoo kale ma xuma in caruurtu taas fahmaan darajo xun waa natiijo xun, in ay ka shaqeeyaan sidii ay u horumarin lahaayeen oo ay u baraan habka ugu wanaagsan ee ay u qaban karaan.
Maxay qoraaladu ka sheegaan shakhsiyadda ardayda
Qoraallada ardaydu waxay kaa caawin karaan inaad wax badan ka barato shakhsiyadda iyo horumarka ilmahaaga. Khaasatan wiilasha qaan-gaarka ah ee bilaabay inay samaystaan ​​goobahooda bulshada, si ay danahooda gaarka ah u yeeshaan, una hayaan waddadii ay ku gaari lahaayeen mustaqbalkooda xirfadeed. Wiil had iyo jeer keena qoraallo aad u sarreeya, waxaa laga yaabaa inay muujiso dhibaatada culeyska badan. Waqti kuma lumiyo waxyaabo kale, lama baxo saaxiibada, lama fal galo, kuwani waa tusaalayaal ka mid ah arrimaha ay tahay in la xakameeyo si looga hortago in carruurta ay la kulmaan dhibaatooyinka la xiriira waxbarashada.
Dhanka kale, khubarada, waxa ay dadka qaarkiis ku meermeeraan kuwa xusidda mudan waxay leeyihiin, waxay tilmaamayaan in ardaygu shaqeeyo, daraasaad uu ku gudan karo waxbarashadiisa. Laakiin waxay sidoo kale tilmaamayaan inaad walaac kale qabto, inaad waqti ku bixiso inaad qabato hawlo kale, inaad leedahay hiwaayad iyo nolol bulsho. Dhab ahaantii, ardaygu wuxuu leeyahay nolol caadi ah kuwaas oo cilmi-baaristu ay tahay qayb aasaasi ah, laakiin uma malaynayaan in ay jiraan wax waswaas ah.
Waddada ayaa ka muhiimsan yoolka
Dugsigu waa shaqada carruurta, waa waajib in ay bartaan waxyaabo badan oo ay u tababaraan si ay u helaan nolol tayo leh oo qaangaar ah. Iyadoo aan loo eegin jidka ay doortaan, haddii ay jecel yihiin daraasadda ama maya, haddi aanay hammi u qabin inay wax ka bartaan jaamacad ama aanay lahayn xirfad shaqo. Waxbarashadu waa qayb lama huraan u ah korriinka ilmaha waana inay ku baraarugaan.
Laakiin aragtida waa in aan marnaba laga tegin, qiimaha dhabta ah ee ubadka, taas oo ah dadaalka, shaqada la qabtay, rabitaanka hagaajinta iyo rabitaanka inuu had iyo jeer sameeyo si ka sii wanaagsan. Dadaalkaas oo dhan waa waxa waalidiintu ay tahay inay qiimeeyaan dhamaadka koorsada. Sababtoo ah wadada ayaa ka muhiimsan yoolka sidaas awgeed, darajooyinka carruurtu maaha waxa ugu muhiimsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Hooyooyinka » Talada hooyooyinka » Waa maxay sababta darajooyinka carruurtu aanay ahayn waxa ugu muhiimsan
Kala xadaynta boosaska lamaanaha
Soo ogow tifaftirka cusub ee Massimo Dutti: Iftiinka